China RXR-M80D မီးသတ်စက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Topsky
အထူးစက်ရုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် RXR-M80D မီးသတ်စက်သည် lithium battery power supply ကို power supply အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ မီးငြိမ်းသတ်စက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းကိုအသုံးပြုသည်။ အဓိကအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောမီးသတ်သမားများနှင့်မီးခိုးငွေ့မီးလောင်ရာနေရာများတွင်အထူးမီးဖိုချောင်သုံးကိရိယာများကိုအစားထိုးရန်အဓိကအားဖြင့်မီးသတ်ဆေးစက်သည်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
လျှောက်လွှာ၏ 2. Range
ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုနှင့်ပေါက်ကွဲမှု၊
တစ်နာရီ ၅.၄၇ ကီလိုမီတာသို့ရောက်ရှိပါ။
2. ★ Multifunctional အသုံးပြုမှု
3. ★အမျိုးမျိုးသောအဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု (optional ကို)
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၈ မျိုး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် ၂ မျိုး
4. ★စက်ရုပ် networked မိုcloud်းတိမ်ပလက်ဖောင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်
စက်ရုပ်၏တည်နေရာ၊ ပါဝါ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသတင်းအချက်အလက်များစသည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီအခြေအနေသတင်းအချက်အလက်များကို 4G / 5G ကွန်ယက်မှတဆင့် Cloud သို့ကူးယူနိုင်ပြီး back-end PC နှင့် mobile terminal တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၁။ အမည် - မီးသတ်စက်ရုပ်
2. မော်ဒယ်: RXR-M80D
၃။ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ - မီးဘေးကာကွယ်ခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်နေရာများတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကင်းထောက်ခြင်း၊
၄။ မီးဘေးကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း -“ GA 892.1-2010 မီးစက်ရုပ်အပိုင်း ၁ အထွေထွေနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ”
5. ပါဝါ: လျှပ်စစ်, ternary lithium ဘက်ထရီ
6. အရွယ်အစား: ≤အရှည် 1528mm * အကျယ် 890mm * အမြင့် 1146mm
7. အလှည့်အချင်း: ≤1767mm
8. ★အလေးချိန်: ≤386kg
9. စွမ်းဆောင်ဆွဲအင်အား: ≥2840N
၁၀။ ဆွဲယူနိုင်သည့်အကွာအဝေး: ≥40m (DN80 ကြွယ်ဝသောရေပိုက်နှစ်ခုကိုဆွဲယူပါ)
11. ★အမြင့်ဆုံး linear မြန်နှုန်း: .51.52m / s, အဝေးမှစဉ်ဆက်မပြတ် variable ကိုမြန်နှုန်း
12. ★လိမ်ညာမှု - ၁.၇၄%
13. ဘရိတ်အကွာအဝေး: .110.11m
14. ★တောင်တက်နိုင်စွမ်း - ၈၄.၈% (သို့မဟုတ် ၄၀.၃ °)
15. အတားအဆီးဖြတ်ကျော်အမြင့်: ≥305mm,
16. လှိမ့်တည်ငြိမ်မှုထောင့်: ≥45ဒီဂရီ
17. ★ Wade အနက်: ≥400mm
၁၈။ ဆက်တိုက်လမ်းလျှောက်ချိန် - ၂ နာရီ
၁၉။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်ချိန် - ၁၆ နာရီဆက်တိုက်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုစစ်ဆေးမှုမှတဆင့်
20. ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး: 1100m
21. ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်အကွာအဝေး: 1100m
22. ★အလိုအလျောက်မှုန်ရေမွှားအအေးပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက် - ၎င်းတွင်သုံးလွှာအလွှာရှိသောရေကုလားကာကိုယ်တိုင် - မှုန်ရေမွှားအအေးဒီဇိုင်းရှိပြီးစက်ရုပ်တစ်လုံးလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသောရေကုလားကာကိုဖွဲ့စည်းရန်စက်ရုပ်ကိုယ်ထည်ကိုအေးခဲစေပြီးအအေးပေးသည့်ဘက်ထရီ၊ မော်တာ၊ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်သော့တို့ကိုသေချာစေသည်။ စက်ရုပ်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်အပူချိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိသည်။ အသုံးပြုသူသည်နှိုးစက်အပူချိန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
၂၃။ အလိုအလျောက်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မကောင်းသောအကြံအစည်ဖိအားပေးခြင်း။ စက်ရုပ်၏အဓိကမော်တာသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်ဘရိတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဖျန်းပစ်မီးသတ်ဆေးဘူးများတွင်မီးခိုးစွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။
၂၄ ★စက်ရုပ် crawler - မီးသတ်စက်ရုပ် crawler ကိုမီးတောက်သော၊ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ရာဘာဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည်။ အဆိုပါ crawler ၏အတွင်းပိုင်းသတ္တုဘောင်ဖြစ်၏ ၎င်းသည် crawler Anti-derailment protection design ရှိသည်။
၂၅။ ရေစိုခံခါးပတ်ကြိုးပုံစံ (optional) - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံနှစ်ဆကို ဖြတ်၍ ရေခါးပတ်ထုထည်ကိုထည်သွင်းနိုင်အောင် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်
၂၆။ Automatic hose off function (optional) - အဝေးထိန်းကွပ်ကဲရေးလုပ်ငန်းသည်အလိုအလျောက်ရေပိုက်ပိတ်ခြင်းကိုသဘောပေါက်စေသည်
၂၇။ ထိန်းချုပ်ရေး terminal: သုံးအကာအကွယ်သေတ္တာအမျိုးအစားနှင့်အချက်အလက်ပေါင်းစည်းထားသောအဝေးထိန်း terminal
၁။ မီးသတ်မော်နီတာ - ပြည်တွင်းပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောမီးမော်နီတာ
၂။ မီးသတ်ဆေးအမျိုးအစား - ရေသို့မဟုတ်အမြှုပ်
3. ပစ္စည်း: အမြောက်များကိုယ်ထည်: သံမဏိ, အမြောက်များ: လူမီနီယမ်အလွိုင်း Hard ဓာတ်တိုး
4. အလုပ်ဖိအား (Mpa): 1.0 (Mpa)
5. မှုန်ရေမွှားနည်းလမ်း: DC နှင့် atomization, စဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိ
6. ★စီးဆင်းနှုန်း - 80.7L / s ရေ,
7. Range ()): ≥84.6m, ရေ
၈။ လည်ပတ်ထောင့် - အလျားလိုက် -90 ° ～ 90 °, ဒေါင်လိုက် 28 ° ～ 90 °
9. အများဆုံးရေမှုန်ရေမွှားထောင့်: 120 °
၁၀။ နောက်ဆက်တွဲကင်မရာ - ရေအောက်ကင်မရာနောက်ဆက်တွဲကင်မရာ၊ resolution 1080P၊ ထောင့်ကျယ်အကျယ် ၆၀ ဒီဂရီဖြစ်သည်
၁၁။ Infrared heat source tracking function (optional) - အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူမျက်လုံးခြေရာခံခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ၎င်းသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ်မှတဆင့်အပူအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
12. Foam Tube: အမြှုပ်ပြွန်ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ အဆိုပါအစားထိုးနည်းလမ်းအမြန် plug ကိုဖြစ်ပါတယ်။ မီးရေမော်တာသည်ရေ၊ ရေမြှုပ်များနှင့်အရည်ရောစပ်မှုများကိုပက်ဖြန်းနိုင်သည်။ သို့မှသာတစ်ကြိမ်ရိုက်ချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်များစွာအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး DC နှင့်မှုန်ရေမွှားများအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
fuselage တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာနှင့် pan / tilt ၏အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာတို့မှတဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားသောနေရာ၏ဗွီဒီယိုများအားဝေးကွာသောစူးစမ်းလေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်ပါ
၁။ Reconnaissance စနစ်ဖွဲ့စည်းမှု - ၂။ မော်တော်ယာဉ်တပ်ဆင်ထားသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောအနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာများ၊ ၁ လှည့်သောအနီအောက်ရောင်ခြည် Pan / tilt ။
၂။ ★သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအာရုံခံကိရိယာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း (ရွေးခြယ်မှု) - ကြိုးမဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအမြန်ဖြန့်ကျက်မှုရှာဖွေခြင်းစနစ်နှင့်အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆရှာဖွေစက်တပ်ဆင်ထားသည့်အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ \_ H2S \_ CO \_ CH4 \_ CO2 \_ CL2 \_ NH3 \_ O2 \_ t H2
၁။ ★ကင်မရာအရေအတွက်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ - ဗွီဒီယိုစနစ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောအနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်တစ်လှည့်အလှည့်အနီရောင်ကင်မရာတို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်လေ့လာမှုမတိုင်မီလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သောပုံများ၊ ရေသေနတ်နောက်ဆက်တွဲနှင့် ၃၆၀ ဒီဂရီမြင်ကွင်းပြည့်ညှိချက်များကိုသိနိုင်သည်။
၂။ Camera Illumination - ကိုယ်ခန္ဓာရှိကင်မရာသည် 0.001LUX အလင်းရောင်နိမ့်အောက်တွင်ကြည်လင်သောပုံရိပ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ကင်မရာသည်မြင်ကွင်းကိုသုညအလင်းရောင်ဖြင့်ထိရောက်စွာနှင့်ရှင်းလင်းစွာဖမ်းယူနိုင်ပြီး operating terminal ၏ LCD မျက်နှာပြင်တွင်ပြသသင့်သည်
၃။ ကင်မရာပစ်ဇယ်များ - high-definition ပုံရိပ်သန်း၊ resolution 1080P၊ ထောင့်ကျယ် ၆၀ °
4. ★ကင်မရာကာကွယ်မှုအဆင့်: IP68
၅။ အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ် (optional) - အပူအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ခြေရာခံရန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ်တပ်ဆင်ထားသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ်သည်ပုံရိပ်အားဆန့်ကျင်သောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံရိပ်ရယူခြင်းနှင့် real-time transmission ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင်နိုင်သောမီးအရင်းအမြစ်ရှာဖွေမှု၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်ကိရိယာများသည်ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်စေရန်၊ မူရင်းလက်မှတ်ကိုစစ်ဆေးရန်ရရှိနိုင်ပါသည်
၄.၅ Remote terminal configuration parameters များကို:
1. အရွယ်အစား: 406 * 330 * 174mm
စက်တစ်ခုလုံးအလေးချိန် ၈.၅ ကီလိုဂရမ်
၃။ ပြသမှု - ၁၀ လက်မမြင့်သော - တောက်ပသော LCD မျက်နှာပြင်၊ ဗီဒီယိုအချက်ပြပြောင်းလိုင်း ၃ လိုင်းဖြစ်သည်
4. အလုပ်ချိန်: 8h
၅။ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ - အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့်မော်နီတာတို့ကိုသေသပ်သောသိုင်းကြိုးဖြင့်သုံးပေါက်ခံသေတ္တာအမျိုးအစားသယ်ဆောင်နိုင်သောဒီဇိုင်း၊ ၎င်းကိုတစ်ချိန်တည်းမှာကြည့်ရှုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၊ မြင်ကွင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဘက်ထရီ၊ စက်ရုပ်စောင်းထောင့်၊ အနိမ့်အမြင့်ထောင့်အနေအထား၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသည့်ဓာတ်ငွေ့အာရုံစူးစိုက်မှုအချက်အလက်များတွင်ပြသနိုင်သည့်အဝေးထိန်းခလုတ်အားတည်ငြိမ်စွာတင်ပြနိုင်သည်။ စက်ရုပ်၏ရှေ့၊ နောက်သို့နှင့်အလှည့်များကိုထိန်းချုပ်သည်။ တက်၊ အောက်၊ ဘယ်၊ ညာ၊ ဒီစီ၊ အက်တမ်နင်း၊ ကိုယ်တိုင်လွှဲခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ရပ်များပြုလုပ်ရန်ရေသေနတ်ကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ပုံရိပ်ကို anti-shake function ဖြင့်; ရှေ့၊ နောက်နှင့်ရေသေနတ်နောက်ဆက်တွဲရုပ်ပုံများရယူခြင်းနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တို့ပါ ၀ င်သည့်အချက်အလက်များအကူးအပြောင်းသည်စာဝှက်အချက်ပြစနစ်သုံးကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
6. Walking control function: စက်ဝိုင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး joystick တစ်ခု၊ joystick သည်စက်ရုပ်၏ရှေ့သို့၊ နောက်သို့၊
၇။ PTZ ကင်မရာထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် - နှစ်ခု၊ ၀ င်ရိုးနှစ်ခုစက်မှုဇုန် joystick တစ်ခု၊ joystick တစ်ခုသည် PTZ ကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ အောက်၊ ဘယ်၊
၈။ Monitor ၏ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်
၉။ ဗွီဒီယိုခလုတ် - ဟုတ်ကဲ့၊ ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသောခလုပ်ခလုတ်
၁၁။ အလင်းထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် - ဟုတ်ကဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်သော့ခတ်ခလုတ်
၁၂။ အရန်ကိရိယာများ - ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်သည့် terminal terminal ပခုံးကြိုး၊ tripod
1.GPS function (optional) - GPS တည်နေရာ၊ လမ်းကြောင်းရှာရန်
2. ★စက်ရုပ်အမည်၊ မော်ဒယ်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ဂျီပီအက်စ်တည်နေရာ၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်၊ ဗီဒီယို၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ CO2, CO, H2S, CH4, CL2, NH3, O2 ချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ H2 ဒေတာကို 4G / 5G ကွန်ယက်မှတဆင့် Cloud Management Platform သို့ကူးစက်ပြီးစက်အခြေအနေကို PC / mobile terminal မှတဆင့်စစ်မှန်ကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ တပ်မှူးများသည်စက်ရုပ်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာများဆုံးဖြတ်ရန်အဆင်ပြေသည်
★အရေးပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ် (optional) - စက်ရုပ်အထူးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနောက်တွဲယာဉ်သို့မဟုတ်အထူးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်
၁။ ပေါက်ကွဲလွယ်သောမီးဘေးကာကွယ်ရေးစက်ရုပ်× 1
၂။ လက်ကိုင်အဝေးထိန်း terminal × ၁
၃။ ကားကိုယ်ထည်အားသွင်းစနစ် (၅၄.၆ ဗို့) × ၁ ခု
5. အင်တင်နာ (ဒီဂျစ်တယ်ဂီယာ) × 2
6. အင်တင်နာ (ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်မှု) × ၃
၇။ Robot Cloud စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း× ၁ အစု (ရွေးချယ်နိုင်သည်)
၈။ စက်ရုပ်အရေးပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်× ၁ (အလိုအလျောက်)
၁။ ★စက်တစ်လုံးလုံးမီးဘေးကာကွယ်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - စက်တစ်ခုလုံးသည်အမျိုးသားမီးဘေးအန္တရာယ်အရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးစင်တာကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ မူရင်းကိုကိုးကားရန်ဖြစ်သည်။
2. ★မီးသတ်စက်ရုပ်အတွက်တွားပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ - အမျိုးသားကျောက်မီးသွေးသတ္တုတွင်းပေါက်ကွဲမှုမှကာကွယ်ရန်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန၏စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ
၄။ ★မီးသတ်စက်ရုပ်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရှိပြီးအနာဂတ်ရည်ညွှန်းချက်အတွက်မူရင်းလက်မှတ်ကိုပေးပါ။
ရှေ့သို့ TS3 ကြိုးမဲ့ Remote-Controlled Life Buoy
RXR-YC25000BD ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောမီးခိုးငွေ့များ ...